အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူကွန်ပျူ ဗေဒသုခုမ
« # အသက်ရှည်ရာ အနာမဲ့ကြောင်း (၁)
# လက်ထပ်မယ်ဆို ၊ ရက်မြတ်ဘယ်လို »
# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူPublished October 17, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	.
မြန်မာ့ရိုးရာ သက္ခတ်ဗေဒင်ပညာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ “ဒုက္ခပေးတဲ့ အင်္ဂါ၊ ဗုဒ္ဓဟူးစနေ အပိုင်း (၁) နဲ့ အပိုင်း (၂) ကို လေ့လာ ဖတ်ရှုပြီးသူများအနေနဲ့ “အင်္ဂါ ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ စနေ” သက္ခတ်များရဲ့ ဒုက္ခပေးတတ်တဲ့ သဘောတရားလေးတွေကို ပြန်ပြီးမှတ်မိကြပါလိမ့် ဦးမယ်။ အသက် (၃၅)နှစ်ကျော်ပြီးခန့် လူတစ်ယောက် ဆိုရင်တော့ “အင်္ဂါ ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ စနေ” သက္ခတ်များရဲ့ အတွင်း (အနည်းဆုံး) ၃ကြိမ်လောက် ဖြတ်သန်းပြီးပြီမို့ ဒီဂြိုဟ်တွေရဲ့ ဒုက္ခပေးမှုကို အနည်းနဲ့ အများ ခံစားကြဘူးကြမှာပါ။
ဒီကနေ့ ဆောင်းပါးမှာ အဲဒီ “အင်္ဂါ ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ စနေ” သက္ခတ်ဂြိုဟ်(၃)လုံးအနက် “အင်္ဂါဂြိုဟ် သက္ခတ်”အကြောင်းကို အထူးအလေးပေး တင်ပြလိုပါတယ်။ အင်္ဂါသက္ခတ်ဟာ “လောကဓံ(၈)ပါး ဗေဒင်” မှာ “လောကုတ္တရာနယ်ပယ်” ကို စ, တင် ၀င်ရောက်လာတဲ့ “စပ်ကူးမတ်ကူး” ကာလဖြစ်တယ်။
ရှေ့လာမယ့် သက္ခတ်အဆိုး (၃)ခုဖြစ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူး ၊ စနေ နဲ့ ကြာသပတေး တို့ဟာ “ကောင်းမလား ၊ ဆိုးမလား” ဆိုတာကို “အင်္ဂါဂြိုဟ်သက္ခတ်” အတွင်း ကျွန်တော်တို့ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ တွေးခေါ်ကြံစည် ၊ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် ၊ ဆုံးဖြတ်မှုတွေ ဟာ အတော်လေး အရေးပါတာကို ကျွန်တော် သတိထားမိလာပါတယ်။
အင်္ဂါသက္ခတ်ဟာ ပြောခဲ့သလိုဘဲ ဒီသက္ခတ်ထဲ ရောက်လာရင် လူတွေဟာ စိတ်ကစား လာတတ်ကြတယ်။ အပြောင်းအလဲ တစ်ခုခု လုပ်ချင်လာတတ်ကြတယ်။ လက်ရှိ အလုပ်မှာ အဆင်ပြေနေတဲ့ သူကလည်း ဒီထက် အဆင်ပြေမယ့် လုပ်ငန်းတစ်ခုခုကို ကြံစည်လာ တတ်ကြတယ်။ လက်ရှိ အလုပ်မှာ အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့ သူကလည်း လက်ရှိအလုပ်ကို “စုံကန်” ပြီး နောက်လုပ်ငန်းတစ်ခုကို စိတ်ဝင်စား လာတတ်ကြတယ်။
လက်ရှိမြို့ရွာ/နိုင်ငံမှာ နေထိုင်နေကြသူတွေကလည်း နောက်ထပ် မြို့ရွာ/နိုင်ငံတစ်ခုကို ရွှေ့ဖို့ ပြောင်းဖို့ ကြိုးစားလာတတ် ကြပြန်တယ်။ (ဒီအထဲမှာ ထူးထူးခြားခြား လက်ရှိ မယားကြီးကို စိတ်ကုန်ပြီး နောက်ထပ် မယားလေးကို အပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့ ကြိုးစားနေကြသူတွေလည်း ပါသဗျ)
နောက်ဆုံး ပြောရရင်တော့ “အင်္ဂါသက္ခတ်” ထဲမှာ အပြောင်းအလဲ လုပ်သူ (၇၅)% လောက်ကတော့ “သေချင်တဲ့ကျား တောပြောင်း” ဖြစ်သွားကြတာကို အတွေ့ရ များလှပါတယ်။ သူ့ဟာသူ ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲ ကြီးပွားဖို့ ပြောင်းပြောင်း ၊ ကိုယ့်မိသားစု ကြီးပွားဖို့ ပြောင်းပြောင်း ၊ မိဘကို ကျေးဇူးဆပ်မယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဘဲ ပြောင်းပြောင်း အများစုကတော့ ဒီအပြောင်းအလဲအတွက် ငွေကြေး ၊ ကျန်းမာရေး ၊ စိတ်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှု တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုမှာ အရှုံးကြီး ရှုံးကြတာ များလှပါတယ်။
ဒီ ဘလော့ဂ်လေးကို ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီး ဗေဒင်အမေး/အဖြေ ကဏ္ဍကနေ လူပေါင်းများစွာရဲ့ အခက်အခဲ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းပေးရင်း နဲ့ ရလာတဲ့ အတွေ့အကြုံတစ်ခုကတော့ -
နိုင်ငံရပ်ခြားကို အလုပ်လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ထွက်သွားပြီး တိုင်းတပါးမှာ အဆင်မပြေဘဲ ဒုက္ခမျိုးစုံ ကြုံနေသူ အတော်များများဟာ “အင်္ဂါသက္ခတ်” ထဲမှာ ထွက်လာခဲ့ကြတဲ့သူတွေ များလွန်းလှတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အခြား သက္ခတ်ထဲမှာ ထွက်လာပြီး အဆင်မပြေ ကြတာတွေလည်း ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရေအတွက်ခြင်း ယှဉ်လိုက်ရင် အင်္ဂါသက္ခတ်ထဲမှာ ထွက်လာသူတွေက မယှဉ်နိုင်ပါဘူး။ အင်္ဂါသက္ခတ် အပြောင်းအလဲမှာ ဒုက္ခရောက်သူတွေက သိသိ သာသာကြီး ကို များနေပါတယ်။
ဒီလို အင်္ဂါသက္ခတ်ထဲမှာ အစ, မကောင်းခဲ့တာက ဒီတစ်နှစ်နဲ့ပြီးသွားသလား ဆိုတော့လည်း မပြီးဘူးဗျ။ ဒီလို အဆင်မပြေဖြစ်တဲ့ “လိမ်ဖယ်လိမ်ဖယ်” ဖြစ်စဉ်ကြီးဟာ “ဗုဒ္ဓဟူးသက္ခတ်” “စနေသက္ခတ်” များကိုပါ ဆက်လက်ဖြတ်သန်းသွားပြီး အဆင်မသင့်ရင် တစ်ဝက်ကောင်း/တစ်ဝက်ဆိုး ဆိုတဲ့ “ကြာသပတေး” သက္ခတ်ထိအောင် “ဒရွတ်ဆွဲပြီး” ပါသွားတတ်သဗျ။
နောက်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်။ အင်္ဂါသက္ခတ်ထဲမှာ အပြောင်းအလဲ တစ်ခုကို လုပ်လိုက်တယ်။ အဆင်ပြေသွားတယ်။ ပြေတာမှ တစ်ဟုန်ထိုး အဆင်ပြေတာ။ အိုကေမှာ စိုပြေလို့။ အင်္ဂါ သက္ခတ်ပြီးလို့ ဗုဒ္ဓဟူးသက္ခတ်မှာလည်း ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ ကောင်းမြဲ ကောင်းလျှက်ဘဲ။ အဲဒီနောက် စနေသက္ခတ် မှာလည်း အောင်လံထူဆဲပါဘဲ။ အဲ – နောက်ဆုံး “ကြာသပတေးသက္ခတ်” လည်း ရောက်ရော “အလဲ၊ အကွဲ” ဖြစ်တော့တာပါဘဲ။ အင်္ဂါ၊ ဗုဒ္ဓဟူး ၊ စနေ ကာလမှာ ရှာဖွေ စုဆောင်းထားသမျှ ပြုတ်ပြုတ်ပြုန်းကုန်တော့ တာပါဘဲ။ စီးပွားမဖြစ်ရင် ကျန်းမာရေး “ထိ” ပါလေရော။ ဒါမျိုးလည်း ရှိသေးတယ်။
အင်္ဂါဂြိုဟ်ဟာ နံပါတ်က (၃)ဂဏန်း ၊ ဂြိုဟ်သက်က (၈)နှစ်ဖြစ်တာကြောင့် “အင်္ဂါသက္ခတ်” ကာလမှာ အလုပ်သစ်၊ အကိုင်သစ် ၊ အကြံအစည်သစ် ၊ ဘ၀သစ် ထူထောင်မှုများဟာ ချက်ခြင်း အောင်မြင်တယ်ဆိုရင်တောင်မှ စိတ်မချရသေးပါ။ နောက်(၃)နှစ် အကြာမှာ ဖြစ်စေ ၊ နောက်ထပ် (၈)နှစ် အကြာမှာဖြစ်စေ အလွန်ကြီးမားတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုကြီးများနှင့် ဘ၀အပြောင်းအလဲကြီးများကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသေးတယ်။ (တနင်္လာ နဲ့ အင်္ဂါ အစပ် ကာလပေါ့)
ဒါကြောင့် ဒီဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်ပြီးရင် ကိုယ့်မှာ လတ်တလော အလုပ်ပြောင်း ၊ နေရာပြောင်းဖို့ စိတ်ကူးနေပြီ၊ စ,လုပ်နေပြီဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိအသက်ပိုင်းရဲ့ “သက္ခတ်”ဟာ “အင်္ဂါသက္ခတ်” များဖြစ်နေသလားဆိုတာ အရင် ဆန်းစစ်ကြည့်သင့်လှပါတယ်။ “အင်္ဂါသက္ခတ်” များဖြစ်နေပြီ ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်စစ်ဆေး ကြည့်ပါဦး။ ဒီ အပြောင်းအလဲဟာ တကယ်လုပ်ဖို့ လိုအပ်သလား လို့။
ဒီမှာ နေ့သား တစ်ဦးစီအတွက် ဘ၀တစ်သက်တာအတွင်း “အင်္ဂါသက္ခတ်” ကို ရောက်မယ့် နှစ်လေးတွေပါ။
တနင်္ဂနွေသားသမီးများ = (၃)နှစ်၊ (၁၁)နှစ် ၊ (၁၉)နှစ် ၊ (၂၇)နှစ် ၊ (၃၅)နှစ် ၊ (၄၃)နှစ် ၊ (၅၁)နှစ် ၊ (၅၉)နှစ် ၊ (၆၇)နှစ် ၊ (၇၅)နှစ် ၊ (၈၃)နှစ် ၊ (၉၁)နှစ် ။
တနင်္လာသားသမီးများ = (၂)နှစ်၊ (၁၀)နှစ် ၊ (၁၈)နှစ် ၊ (၂၆)နှစ် ၊ (၃၄)နှစ် ၊ (၄၂)နှစ် ၊ (၅၀)နှစ် ၊ (၅၈)နှစ် ၊ (၆၆)နှစ် ၊ (၇၄)နှစ် ၊ (၈၂)နှစ် ၊ (၉၀)နှစ် ။
အင်္ဂါသားသမီးများ = (၁)နှစ်၊ (၉)နှစ် ၊ (၁၇)နှစ် ၊ (၂၅)နှစ် ၊ (၃၃)နှစ် ၊ (၄၁)နှစ် ၊ (၄၉)နှစ် ၊ (၅၇)နှစ် ၊ (၆၅)နှစ် ၊ (၇၃)နှစ် ၊ (၈၁)နှစ် ၊ (၈၉)နှစ် ။
ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ = (၈)နှစ်၊ (၁၆)နှစ် ၊ (၂၄)နှစ် ၊ (၃၂)နှစ် ၊ (၄၀)နှစ် ၊ (၄၈)နှစ် ၊ (၅၆)နှစ် ၊ (၆၄)နှစ် ၊ (၇၂)နှစ် ၊ (၈၀)နှစ် ၊ (၈၈)နှစ် ၊ (၉၆)နှစ် ။
ကြာသပတေးသားသမီးများ = (၆)နှစ်၊ (၁၄)နှစ် ၊ (၂၂)နှစ် ၊ (၃၀)နှစ် ၊ (၃၈)နှစ် ၊ (၄၆)နှစ် ၊ (၅၄)နှစ် ၊ (၆၂)နှစ် ၊ (၇၀)နှစ် ၊ (၇၈)နှစ် ၊ (၈၆)နှစ် ၊ (၉၄)နှစ် ။
သောကြာသားသမီးများ = (၄)နှစ်၊ (၁၂)နှစ် ၊ (၂၀)နှစ် ၊ (၂၈)နှစ် ၊ (၃၆)နှစ် ၊ (၄၄)နှစ် ၊ (၅၂)နှစ် ၊ (၆၀)နှစ် ၊ (၆၈)နှစ် ၊ (၇၆)နှစ် ၊ (၈၄)နှစ် ၊ (၉၂)နှစ် ။
စနေသားသမီးများ = (၇)နှစ်၊ (၁၅)နှစ် ၊ (၂၃)နှစ် ၊ (၃၁)နှစ် ၊ (၃၉)နှစ် ၊ (၄၇)နှစ် ၊ (၅၅)နှစ် ၊ (၆၃)နှစ် ၊ (၇၁)နှစ် ၊ (၇၉)နှစ် ၊ (၈၇)နှစ် ၊ (၉၅)နှစ် ။
ရာဟုသားသမီးများ = (၅)နှစ်၊ (၁၃)နှစ် ၊ (၂၁)နှစ် ၊ (၂၉)နှစ် ၊ (၃၇)နှစ် ၊ (၄၅)နှစ် ၊ (၅၃)နှစ် ၊ (၆၁)နှစ် ၊ (၆၉)နှစ် ၊ (၇၇)နှစ် ၊ (၈၅)နှစ် ၊ (၉၃)နှစ် ။
(မှတ်ချက်။ ။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မွန်းလွဲမွေးသူ “ရာဟုသားသမီး” များအတွက် လက်တွေ့ တွေ့ရှိချက်အရ “ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီး” များအတိုင်း ရေတွက်ခြင်းက ပိုပြီး အမှန်များတတ်သည်။ လက်တွေ့ နှိုင်းယှဉ် တွက်ချက်ကြည့်စေလိုပါသည်)
ကဲ အထက်က အသက်ပိုင်းတွေအရ ကိုယ်ရောက်နေတာ “အင်္ဂါသက္ခတ်” ဖြစ်တ်ဆိုရင်တော့ – တကယ်မလိုအပ်ဘဲ စိတ်လေပြီး ပြောင်းချင် ရွှေ့ချင်တာမျိုး ဟုတ်မဟုတ် ပြန်လည် သုံးသပ်သင့်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ မအောင်မြင်ဖို့ ၊ ဒုက္ခတွေ့ဖို့က (၇၅)% အထက်မှာ ရှိနေတယ်လေ။ အဆိုးလွတ်မယ့် (၂၅)% ထဲမှာ ခင်ဗျား ပါမယ်လို့ မျှော်လင့် ရင်တော့ ဆက်လုပ်ပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် ပါ,မပါကို ဘယ်လိုလုပ် တိတိကျကျ သိနိုင်မလဲ။
သိနိုင်တဲ့ နည်း(၂)နည်းတော့ ရှိပါတယ်။
(၁) ခင်ဗျားဟာ (၀)ကြွင်း ၊ (၂)ကြွင်း ၊ (၃)ကြွင်း ၊ (၆)ကြွင်း နှစ်တွေမှာ ဖွားမြင်သူဖြစ်ရင် (ဘာနေ့သားဖြစ်ဖြစ်) ခင်ဗျားဟာ အဆိုးလွတ်မယ့် (၂၅)%ထဲမှာ ပါဖို့ သိပ်မလွယ်လှတော့ပါဘူး။
(၂) အဆိုးလွတ်မယ့် (၂၅)% ထဲမှာ ပါ,မပါကို “ဟူးရားဗေဒင်” နဲ့ ဆုံးဖြတ်ကြည့်ပါ။ “ဟူးရားဗေဒင်” မှာ အကျုံးဝင်တဲ့ “ဆန်းဗေဒင်” “အယူတော် မင်္ဂလာ” “အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာ” “မဟာကာလကြီး” “ဟူးရားမဟာဘုတ်” စတဲ့ ပညာတွေကို တကယ်တတ်ကျွမ်းသူနဲ့ တိုင်ပင် ဆုံးဖြတ် ကြည့်ပါ။
ဒီနေရာမှာ “မူလဇာတာ” ထက် “ဟူးရားဇာတာ” က ပိုပြီးရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ အဖြေကို ထုတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာ (ဘ၀အတွေ့ အကြုံအရ) ကျွန်တော် ပြောရဲပါတယ်။
ကဲ – “အပြောင်းအလဲများတတ်တဲ့သူကြီး” ဆိုတဲ့ “အင်္ဂါသက္ခတ်” နယ်ပယ်ကို ရောက်နေကြသူများအတွက် မှန်ကန်တဲ့ ရွေးချယ်မှု ရွေးချယ်နိုင်အောင် အကြုံပြုဆောင်းပါးလေး ဖြစ်ပါတယ်။ မယုံကြည်သူများ ဆက်လုပ်ကြပါ ခင်ဗျား။
ယုံကြည်သူများအတွက် ဆက်လုပ်/မလုပ် ကို ဆုံးဖြတ်ပြီး ဆက်လုပ်လိုလျှင် “အဆိုးလွတ်(၂၅)% မှာ ကိုယ် ပါ,မပါ” ကို တတ်ကျွမ်းသူများ နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါသည်။ (နောက်ဆုံးတော့ အဆုံးအဖြတ် လုပ်ပေးဖို့ ကိစ္စက ဆောင်းပါးရေးသူ ကျွန်တော့်ဆီသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာမည်ကို ကြိုတင်မြင်ယောင်မိပါကြောင်း)
မှန်ကန်သော ရွေးချယ်မှု ပြုနိုင်ကြပါစေ။
Posted in မဟာဘုတ် | Tagged burmese horoscope, MaHaBote, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, မဟာဘုတ်, မြန်မာ ဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	42 comments on “# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ”	colin on October 17, 2010 at 11:56 pm said:
Thanks you Sayar, I review my life and notice it’s true that changes happened in this3years. I’ve lost someone I love in 32yrs (I’m Wednesday Born)…. now I watch out for “ကြာသပတေးသက္ခတ်” ….. thanks
May Peace be with you Sayar….
Moe Thaike on October 18, 2010 at 12:46 am said:
myo thiha on October 18, 2010 at 9:08 am said:
ကျွန်တော့်မွေးနေ့က 23.12.1983 ပါ ကျွန်တော်အခု ဘယ်သက္ခတ်အတွင်းမှာကျနေပါသလဲခင်ဗျာ.. 23.12.2010 ကျော်သွားရင်ရော ဘယ်သက္ခတ်အတွင်းမှာကျပါသလဲခင်ဗျားးးးးးးးးးးး
Dr.Tin Bo Bo on October 18, 2010 at 9:14 am said:
myo thiha သို့
အခုရောက်နေတဲ့ အသက်(၂၇)က “တနင်္လာသက္ခတ်”။ မွေးနေ့ကျော်သွားရင် ရောက်မယ့် (၂၈)က “အင်္ဂါသက္ခတ်”။ ကဲ- ရှေ့နှစ်မှာ အပြောင်းအလဲ တစ်ခုခု လုပ်ချင်စိတ် ပေါ်မလား စောင့်ကြည့်လေ။
myo thiha on October 18, 2010 at 10:13 am said:
23.12.2010 ကျော်သွားရင် အလုပ်ပြောင်းဖို့မကောင်းတော့ဘူးပေါ့နော် ဆရာ……….
KNB on October 18, 2010 at 11:00 am said:
ဆရာဟောသလို 100% တထပ်တည်းပါဘဲ။ 25% ထဲပါပါ့မလားဆရာ။ သက္ခတ်ကောင်းရောက်တဲထိ ရှေ့ရေးလေးသိပါရစေ။
Thant on October 18, 2010 at 1:40 pm said:
ဆရာဗိုလ်၊ အင်္ဂါသက္ခတ်ကတော့ ကျွှန့်တော့ ကိုယ်တွေပါ၊ ၂၀၀၈ မှာ ကြုံတဲ့ အင်္ဂါသက္ခတ်မှာ စိတ်ထဲမှာ လွင့်နေပြီး နိုင်ငံပြောင်းလိုက်တာ သေချင်တဲ့ကြားတောပြောင်းဆိုတာ တစ်ကယ်မှန်ပါတယ်၊ အခု ကြာသာပတေး သက္ခတ်ထဲအထိ လိမ့်နေတုန်းပါပဲ၊ ဘာသာရေး များများလုပ်ခဲ့လို့ နဲနဲ ခံသာတယ်လို့ထင်ပါတယ်၊ ၂၀၀၈ မတိုင်မှီ ဆရာရဲ့ ဆောင်းပါးတွေကို သိခွင့်ရခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒိလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့လိမ့်မယ်လို့ မထင်ပါ၊ သတိထားပြီး နေသွားလို့ရနိုင်မှာပါ၊ နောက်လူတွေလဲ ကျွှန်တော့်လို မမှားစေချင်ပါ၊ ကြိုတင်ပြီး သတိထားနိုင်ပါစေ။ ဆရာဗိုလ်ကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
kyaw lin on October 18, 2010 at 3:06 pm said:
ဆရာ,အဆင်ပြေရင် လက္ခဏာ အကြောင်း ပြောပါဦး။
Dr.Tin Bo Bo on October 18, 2010 at 3:07 pm said:
လက္ခဏာပညာကို လွှတ်ချထားတာ ကြာလှပြီမို့ မပြောတတ်တော့ပါ။ မေ့သလောက် ဖြစ်နေပါပြီ။
su sandi maung on October 18, 2010 at 3:26 pm said:
သမီးက ၂၄.၂..၁၉၉၈ မှာမွေးတာပါ
အဂါင်္သမီးပါ အသက်က ၁၂ နှစ်ပါ
ဒီ ၂၀၁၀ ဒီဇင်ဘာမှာမလေးကျောင်းတက်တော့မှာပါ
ဆရာတွက်ပြီးရင် သမီးရဲ့ မေးလ် ကိုပို့ပေးပါရှင်
Dr.Tin Bo Bo on October 18, 2010 at 3:32 pm said:
ဗေဒင်မေးလိုလျှင် အမေး/အဖြေကဏ္ဍ (၅)ဖွင့်အောင် နဲနဲစောင့်ပေးပါ။ အီးမေးလ်က ကိစ္စတိုင်း ဖြေမပေးပါ။ ကျန်းမာရေး ကိစ္စလောက်ဘဲ ဖြေပေးပါတယ်။
knc on October 18, 2010 at 3:56 pm said:
အင်ဂါသက်ခတုန်းကပြောင်းချင်သော်လည့်း မပြောင်းဖြစ်ပေမဲ့ အခု ဗုဒဟူးသက်ခထဲကျနေပြိး ပြောင်းဖို့ ကြိုးစားတာအောင်မြင်ပါ့မလားလို့ ဗုဒဟူးသက်ခအကြောင်းလဲ့ဆက်ရေးပါအုန်းဆရာ
su sandi maung on October 18, 2010 at 4:17 pm said:
mon on October 18, 2010 at 4:30 pm said:
ဆရာ သမီးက 4.9.1983 ပါ တနင်္ဂနွေပါ. မွေးနေ့ကျော်တော့ ဗုဒ`ဓ်ဟူးသက္ခတ်လို့ ဆရာပြောတဲ့အတိုင်း တွက်ကြည့်လို့သိရပါတယ် အဲဒါ ဘာတွေ ကြုံတွေ့နိုင်မလဲ သိချင်ပါတယ်ရှင့်
Dr.Tin Bo Bo on October 18, 2010 at 5:28 pm said:
ဗုဒ္ဓဟူးသက္ခတ်အကြောင်း အကျဉ်းချုပ် သိချင်ရင် “ဒုက္ခပေးတဲ့ အင်္ဂါ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ စနေ” အပိုင်း(၁)ကို ဖတ်ကြည့်ပါ။ ဒီလင့်ခ်ကို Click နှိပ်ပြီး သွားနိုင်ပါတယ်။ http://www.compubaydathukhuma.com/?p=18
ကိုသားကြီး on October 18, 2010 at 8:35 pm said:
ကျွန်တော် ဗေဒင်ပညာကို နားမလည်ပါဘူး.. ဒါပေမယ့် စိတ်ဝင်စားပါတယ်. လေ့လဲလေ့လာချင်ပါတယ်.. အခု ဒီမှာရေးနေတဲ့ သက္ခတ်ဆိုတာ ဘာလဲဟင်.. ပြီးတော့ အဲဒီအကြောင်း ဘယ်မှာသွားလေ့လာလို့ရလဲ.. အချိန်အားရင် တစိတ်လောက် လမ်းညွှန်ပေးပါအုံးဗျာ..
Dr.Tin Bo Bo on October 18, 2010 at 8:36 pm said:
“သက္ခတ်” ဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ အသက်ပိုင်း ရောက်ရှိနေတဲ့ဂြိုဟ်ကို ပြောတာဖြစ်တယ်။ “သက်ရောက်” လို့လည်း ခေါ်ကြတယ်။ မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်ပညာအရ လူတစ်ယောက်ဟာ အသက်တစ်နှစ်ကူးပြောင်းသွားတိုင်း ၊ ဂြိုဟ်တစ်ခုရဲ့ စိုးမိုးမှု အောက်ကို ရောက်သွားတယ်လို့ ယူဆတယ်။ လက်ရှိ ရောက်နေတဲ့ အသက်(နှစ်)ဟာ အင်္ဂါဂြိုဟ်ရဲ့ စိုးမိုးမှု အောက်ကို ရောက်သွားရင် “အင်္ဂါသက္ခတ်” ၊ ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်ရဲ့ စိုးမိုးမှု အောက်ကို ရောက်သွားရင် ဗုဒ္ဓဟူးသက္ခတ်လို့ အမည်တပ်ကြတယ်။ ကိုယ် အခုဘယ်သက္ခတ်မှာ ရောက်နေတယ် ဆိုတာကို သိနိုင်ဖို့ ဇယားတစ်ခုလုပ်ထားတယ်။ “ဒုက္ခပေးတဲ့ အင်္ဂါ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ စနေ” ဆိုတဲ့ ပို့စ်ကို သွားကြည့်ပြီး ဇယားကို ကူးယူနိုင်ပါတယ်။ ဒီလင့်ကနေ သွားလိုက်ပါ။ http://www.compubaydathukhuma.com/?p=18
စော on October 19, 2010 at 7:36 am said:
ငွေအားလုံးတော့ မကုန်ဘူး။ ဘုရား၊ တရားလုပ်လို့ လား မသိဘူး။
အင်္ဂါမှာရပြီ ကြာသပတေးမှာ အဲသလို ဖြစ်တာပဲ။
ခုတော့ ဘယ်တော့မှ ဘဝတိုးတက်မှာလဲ မျှော်နေတာ… အင်္ဂါသမီးမို့ လား မသိဘူး ငြိမ်နေရင် အပြောင်းအလဲ မရှိရင် နေရတာ မကောင်းဘူး။
saiaung on October 19, 2010 at 6:34 pm said:
right sayar yae
kyawnor lae doteka yout nay pi
aku mha tue awin pae shi tay ter
visa change po lae shi tal
asin ma pyae mhar so tal ,
thak u min on October 19, 2010 at 7:27 pm said:
my husband was born (30/12/1970)wednesday and i was(13/5/1982)thursday born.
we are going to change our work coming 2011.
i would like to know is it going to be good or bad for us?I’m little worry because our baby is just6months only.
Pls help me.May i know we are whick takhat?
Dr.Tin Bo Bo on October 20, 2010 at 8:41 am said:
ဗေဒင်မေးတာတွေကို ဒီနေရာမှာ ဖြေမပေးပေမယ့် ဒီကိစ္စက သိပ်အရေးကြီးလို့ အမြန်ဖြေပေးလိုက်တယ်။ ယောင်္ကျားဖြစ်သူက အခု အင်္ဂါသက္ခတ် ၊ ၂၀၁၁မှာ အသက်(၄၁)နှစ်=ဗုဒ္ဓဟူးသက္ခတ်။ ဗုဒ္ဓဟူး သက္ခတ်ဟာ “လုပ်ငန်းသစ်”“ဘ၀သစ်” မတည်ထောင်သင့်တဲ့ သက္ခတ်၊ တည်ထောင်ရင် ၉၀% ပျက်စီးတတ်တယ်။ မိန်းမဖြစ်သူက အခု တနင်္လာသက္ခတ်၊ ၂၀၁၀မှာ “အင်္ဂါသက္ခတ်”။ နောက်ပြီး (၀)ကြွင်းဖွားလည်းဖြစ်ပြန်။ အင်း- ကြည့်လည်း လုပ်ဦးနော်။ ဟူးရားဗေဒင်နဲ့တွက်ကြည့် တော့လည်း မကောင်း။ (I’m little worry) တဲ့။ little worry မဟုတ်ဘူး – စိတ်နဲနဲလေးဘဲ ပူရမယ့် ကိစ္စမဟုတ်ဘူး၊ အတော်ကြီးကို ပူပန်ရမယ့်ကိစ္စနော် (most serious)။ မပြောင်းဘဲနေလို့ရရင် မပြောင်းပါနဲ့လို့ အကြံပေးလိုတယ်။
စော on October 20, 2010 at 10:08 am said:
အဲဒီအချိန်တွေမှာ ပြောင်းလိုတဲ့စိတ်ထက် ပြောင်းဘို့ ရာ အေုကာင်းပေါ်လာရင်ရော ဘယ်လိုလုပ်သင့်သလဲ။
Dr.Tin Bo Bo on October 20, 2010 at 11:05 am said:
ဟုတ်တယ်။ တစ်ချို့ကျပြန်တော့လည်း ကိုယ်တိုင်က မပြောင်းလိုပေမယ့် ကံကြမ္မာက ပြောင်းဖို့ ဖန်လာတတ်တယ်။ ဒီတော့လည်း (၂၅)% ထဲ ပါ,မပါ တွက်ကြည့်ပေါ့။
ထိန်လင်း on October 22, 2010 at 4:00 pm said:
နတ်က္ခတ်ဇာတာခွင်နဲ့ မဟာဘုတ်နဲ့ ဘယ်ဟာကပိုပီးတိကျမှန်ကန်ပါသလဲဆရာသိချင်ပါတယ်။
Dr.Tin Bo Bo on October 22, 2010 at 4:11 pm said:
ပညာရပ်အပေါ် ဘယ်လောက်ကျွမ်းကျင်နိုင်နင်းသလဲ ဆိုတဲ့အပေါ်မှာ တည်ပါတယ်။ “ကျွမ်းကျင်ရာ လိမ္မာ” ဆိုတဲ့ စကားပုံ ရှိတယ်မဟုတ်လား။ ဒါပေမယ့် ထပ်တူတော့ မတူညီနိုင်ဘူး။ နက္ခတ်ဗေဒင်မှာ အသေးစိတ်ကြည့်လို့ ရတဲ့ ကိစ္စကို မဟာဘုတ်မှာ ကြည့်လို့မရတာ ရှိတယ်။ မဟာဘုတ်မှာ အသေးစိတ် ကြည့်လို့ရတာကို နက္ခတ်ဗေဒင်မှာ ကြည့်မရတာရှိတယ်။ နက္ခတ်ဗေဒင်ပညာကတော့ လျှို့ဝှက်မှု သိပ်မရှိဘူး။ စာဖတ်နိုင်ရင် တတ်မယ်။ မဟာဘုတ်က လျှို့ဝှက်မှုတွေ အများကြီး ရှိတယ်။ ဆရာကောင်းနဲ့တွေ့မှ တတ်မြောက်မယ်။
မေဇူး on October 24, 2010 at 2:18 pm said:
ဆရာရှင့် ဘယ်သက္ခတ်တွေမှာ ဘ၀အသစ်စ.. အိမ်ထောင်ပြုတဲ့ အခါ အသင့်တော်ဆုံးပါလဲ .. ခုသီတင်းကျွတ်ပြီးချိန်မှာ မင်္ဂလာဆောင်သင့်တဲ့ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် နေ့ရက်လေးတွေကိုလည်း ကျေးဇူးပြုပြီး လမ်းညွှန်ပေးပါ ဆရာ။ လေ့လာမှတ်သားခွင့်ရလို့ ကျေးဇူးအထူးပါ ဆရာ။
Ma Hnin Hnin Thet on November 1, 2010 at 11:48 am said:
သမီးက22.2.1975 ခုနှစ်ပါ။ 39ကျမှအဂါင်္သက္ခ၀င်မှာလား၇ှင်.။ဘယ်ခုနှစ်တွေမှာဝင်ခဲ.လဲပြောပေးနိုင်မလားရှင်.
မိ on November 30, 2010 at 9:20 am said:
ဟယ်.. ဂါင်္သက္ခ၀င်မှပဲ.. အနိုင်ငံသားပြောင်းလိုက်မိပြီ။ ၁ကြွင်းနှစ်မို့ သိပ်မဆိုးဘူးလို့ ယူဆပါတယ်
ခက် on December 19, 2010 at 12:37 pm said:
ဆရာရှင့် သမီးအသက်ကအခု၂၆နှစ်ထဲမှာပါ… အင်္ဂါဂြိုဟ်သက္ခတ် အတွင်းကျနေပါတယ်.. အပြောင်းအလဲလုပ်ချင်တာတွေလဲရှိနေပါတယ်.. ဒီအတောအတွင်းမှာမလုပ်ပဲ ၂၇ အတွင်းမှာအပြောင်းအလဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကောအဆင်ပြေနိုင်ပါ့မလာ…သမီးအပြောင်းအလဲက အရမ်းအရေးကြီးလို့ပါ.. ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ဆရာမေလ်း ဖြစ်ဖြစ် ဖုန်းပဲဖြစ်ဖြစ် အဆက်အသွယ်လိုချင်ပါတယ်
Susan on January 8, 2011 at 8:04 pm said:
26.9.1980 သောကြာ၊ အသက် ဘယ်လောက်မှာ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းထူထောင်နိုင်မလဲ
Susan on January 8, 2011 at 8:11 pm said:
သမီးကို သောကြာနေ့ 26.9.1980 နံနက် ၅း၃၀ မှာ မွေးတာပါ၊ ဘယ်အသက်အရွယ်လောက်မှာ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းပိုင်ရှင် ဖြစ်မလဲ သိချင်လို့ပါဆရာ။
မအေးအေးငြိမ်း on February 18, 2011 at 4:04 pm said:
ဆရာရှင့် သမီးရဲ့မွေးနေ့က- 17.4.1992 ပါ (သောကြာ)သမီးပါဆရာ
ဟူးရားနံပါတ်က39ပါဆရာ သမီးဒီတစ်နှစ်အတွင်းချစ်သူရနိုင်ပါ့မလား။ တကယ်လို့ရခဲ့
thanhtikesoe on February 21, 2011 at 1:54 pm said:
မယဉ်မိုးမောင် on February 28, 2011 at 6:02 pm said:
ကျွန်မ နာမည်မှာ ယဉ်မိုးမောင် ဖြစ်ပါသည်။( မိုးမိုး ဟု အခေါ်များပါသည်။)
ဆရာ့ ဆောင်းပါးများမှာ ကျွန်မနှင့် တော်တော်များများတိုက်ဆိုင်မှုရှိပါသည်။
ထို့ ကြောင့် ဆရာထံတွင် အသေးစိတ်တွက်ချက်လိုပါသည်။ ဥာဏ်ပူဇော်ခ သိပါရစေ။
ကျွန်မမှာ ယခုတွင် နိုင်ငံခြားတွင် ခေတ္တနေထိုင်လျက်ရှိပါသည်။ ဆရာ ရန်ကုန်တွင်
ဟောခန်းဖွင့်သည်ဆိုပါက ကျွန်မ ညီမတယောက်ကို ကိုယ်စားလွှတ်၍ တွက်ခိုင်းပါမည်။
မေးလ်မှတဆင့် ဟောကြားပေးနိုင်ပါက ပို၍အဆင်ပြေပါသည်။ကျွန်မ၏ မွေးနေ့ မှာ
၂၆၊ ၅၊ ၁၉၇၇ ( ကြာသပတေး သမီး)ဖြစ်ပါသည်။မွေးချိန်မှာ ၁ နာရီ ၃၅ မိနစ်( မတိကျပါ)
၃၅ မှ ၄၅ မိနစ်ကြားဖြစ်ပါသည်။ မွေဖွားရာနေရာမှာလပွတာမြို ဖြစ်ပါသည်။
ဆရာ ပြန်ကြားချက်ကိုစောင့်မျှော်နေပါမည်။ ဆရာကျန်းမာပါစေ။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
သမီး on March 9, 2011 at 11:00 am said:
ဆရာရှင့်!သမီးက‌တနင်းလာသမီးပါ။‌မွေး‌နေ့ က‌တော့ (၁၇.၉.၁၉၈၄)ခုနှစ်ပါ။သမီးချစ်သူက ‌သောကြာသားပါ။‌သူ့ ရဲ့ ‌မွေး‌နေ့ က‌တော့ (၂၇.၇.၁၉၇၉)ခုနှစ်ပါ။ဟူးရားဂဏန်းက ၈ ပါ။ သမီးတို့ ‌နောက်နှစ်၂၀၁၂ ‌လောက်မှာလက်ထပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားကြပါတယ်။ဒါ‌ပေမဲ့ သမီးစိတ်ထဲမှာစိုးရိမ်‌ကြောင်ြ့ကမှု‌တွေအမြဲဖစ်‌နေရပါတယ်။သူနဲ့ ပတ်သတ်ရင်အမြဲစိတ်ဆင်းရဲ ‌နေရပါတယ်။ဒါ‌ပေမဲ့သူ့ ကို သမီးအရမ်းချစ်ပါတယ်။သူနဲ့ ‌ဝေးရမှာလဲ‌ကြောက်ပါတယ်။သူ နဲ့ လက်ထပ်ပြီးမှ မ‌ပျော်ရွှင်ရတဲ့ဘ၀မျိုးနဲ့ ‌နေရမှာလဲ‌ကြောက်ပါတယ်။အဲဒါသူနဲ့ သမီးချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ အတူ‌နေနိုင်ဖို့ အ‌ရေး ကူညီအကြံ‌ပေးပါဦး‌နော်။
စောစော on June 16, 2011 at 2:54 pm said:
မွေးနေ့က 4.12.1979 ပါ.အခုဘယ်သက်ခတ်ထဲရောက်နေလဲသိချင်ပါတယ်.
Mote Thone on June 26, 2011 at 3:41 pm said:
I read about the thatkhat two years ago before I went into Tuesday Thatkhat. I wanted to avoid the change but there was something urging me to make it.And so I made it and now thinking back it wasavery bad move. Financially it was not so bad but the amount of stress that I have had until today relating to work( I am now in Wednesday Thatkhat and about to go into Saturday Thatkhat). Now I believe that i should have avoided the urge to change in Tuesday Thatkhat. Next time I will watch out for it. Thank you very much.
naingmintun on July 29, 2011 at 11:37 am said:
၉လပိုင်း ၁၉၇၀ဖွား အဂ်ါသားပါ။ မွေးလကျော်ရင် “အင်္ဂါသက္ခတ်” ကလွတ်ပြီလားဆရာ။ ၂၅%ထဲမှာကောပါနိုင်ပါသလား။
Khin soe on November 3, 2011 at 8:21 pm said:
My birth date was 06-July-1970. Now, I’m working on abroad. I wan to go back in 2012 as I’m not really happy in working here. I want to stay together with my family. Is it possible to change my career in the next year?
waihincho on December 3, 2011 at 5:50 pm said:
ဆရာ အခု သက်ခက်ညိမညိက 24 နှစ်တော့အသက်ကပြည့်ပြီးပြီ ပြောင်းလို့ရမလားသိချင်ပါတယ်ဆရာ
ဆရာပြောသလိုပဲ သက်ခက်ကြောင့်လားတော့မသိဘူး အခုအလုပ်ထွက်ပြီး ဘယ်အလုပ်ပြောင်းရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားနေပါတယ်ဆရာ 24 နှစ်ပြည့်ပြီးရင် ညိမညိပြန်ဖြေပေးပါဆရာ
thetoomg on February 6, 2012 at 10:53 pm said:
ဆရာရေကျွှန်တော်ကတော့ သောကြာသားမွေးတဲ့ နာရီက11း55am(9.9.1988)ပါကံဆိုးပုံကပြောတောင်မပြောချင်ပါဘူး
eieichaw on March 5, 2012 at 12:39 pm said:
နာမည် = အိအိချော (တနင်္ဂနွေ)
မေးခွန်း= ကျွန်မချစ်သူက 15-11-1977 ဖွား(အင်္ဂါသား)ပါ
ကျွန်မတို့မှာ အဆင်မပြေမှုတွေ၊ ပူပန်သောကတွေ အများကြီးကြုံခဲ့ရပါတယ်။အခုနှစ်ထဲမှာကျွန်မတို့လက်ထပ် ဖို့ရည်ရည်ထားပါတယ်။ အဲဒါတကယ်ရောအဆင်ပြေဖြစ် မြောက်နိုင်ပါမလား ဆိုတာ သိပါရစေ။ကျွန်မတကယ်ပျော်ရွှင်နိုင်ပါမလား။ တကယ်လက်ထပ်ဖြစ်မှာလားဆိုတာ သိပါ၇စေ။ ဖြေကြားပေးပါနော်။ ပထမတခါလဲဒီမေးခွန်းပဲမေးထားပါသေးတယ်။ခုထိမဖြေကြားသေးပါဘူး။ မြန်မြန်လေးဖြေကြားပေးပါနော်။
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (60,648)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (49,358)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (47,199)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (32,018)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (24,047)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (15,358)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (13,184)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,699)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,738)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,396)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,353)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (10,191)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (10,153)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,132)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,455)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,401)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (9,038)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,904)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,747)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,746)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,290)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,892)# မေလအတွက် (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (7,774)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,740)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,607)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,555)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,349)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (7,152)# မြန်မာသက္ကရာဇ် (၁၃၇၅)ခုနှစ် (၇)ရက်သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,103)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (7,044)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !
16 Users Online	Link1 | Link2 | Link3Copyright © 2013. Compu BayDaThuKhuMa. Designed by CompuBayDaThuKhuMa.